Masaajidkii Soomaalida Eskilstuna oo la gubay [Video] | Somaliska
Masaajidkii Soomaalida Eskilstuna oo la gubay [Video]
Shalay duhurkii waxaa dab la qabadsiiyay masaajid ay ku tukadaan Soomaalida Eskilstuna iyadoo ay dhowr qof ku dhaawacmeen. Masaajidka ayaa guud ahaan gubtay, iyadoo boolisku ay sheegeen in si kas ah loo gubay masaajidka oo markii dabka uu bilowday marqaatiyaal ay sheegeen in uu qof goobta wax ku tuuray.
Marka dabku bilowday ayaa masaajidka waxaa ka socotay salaada, iyadoo ay jameecadu ku jireen rakcadii ugu dambaysay balse halmar la kala cararay markii qof uu soo galay oo uu ku qayliyay war dab ayaa kacay. Iyadoo qaboow xun uu jiro ayaa dadkii oo kabo iyo jaakado la’aan ah waxay isugu soo bexeen dibada.
Durbadiiba waxaa la wacay booliska iyo dab-damiska iyadoo markii dambe lagu guuleystay in la damiyo dabka balse uu guud ahaan gubtay masaajidka iyo wixii dhexyaalay. Dadkii dhaawacmay oo gaaraya 5 qof ayaa la sheegay in mid ka mid ah uu dhaawaciisa halis yahay.
Ma ahan markii ugu horeysey ee bartilmaameed laga dhigto masaajida Muslimiinta, iyad0o sanadkaan la sheegay in bil kasta masaajid weerar loo geystay. Maanta ayaa la filayaa in dibad bax lagu qabto masaajidka hortiisa taasoo lagu taageerayo Muslimiinta, haddii aad ka soo qeyb gali karto waxaa uu bilaabanayaa kl. 14.00. Wixii faahfaahin ah halkaan ayaad ka helaysaa.
Soomaalida ay sharciga siisay Sweden 2011
waa sheydaamiin alle ka furtay cadaab ayey u socdaan waana ku waari doonaan